12 Amathiphu we-WhatsApp namasu (2020) - Kufanele Ukwazi - Komphakathi
Siphila ezweni elibonakalayo lapho kukhulunywa khona ezingxoxweni, ukwabelana ngemininingwane kwenziwa ikakhulukazi kuma-smartphones ethu akamuva. I-WhatsApp ingenye yezinhlelo zokusebenza ezithandwa kakhulu futhi ezisetshenziswa kakhulu. Ukuba isicelo sokuthumela imiyalezo esheshayo nesheshayo, i-WhatsApp isetshenziselwa izinhloso eziningi. I-WhatsApp ingumqondo wamaphayona amabili e-Yahoo. Ngonyaka we-2014, lokhu uhlelo lokusebenza olumangalisayo lwathathwa yi-Facebook .
Noma ngubani onoxhumano lwe-inthanethi olufanele angabelana ngamavidiyo, alalelwayo, nezithombe kalula ngemizuzwana. Ukuxhumana nezihlobo noma abangane abahlala kude nakho sekukhululeke ngokwengeziwe ngesikhungo sohlelo lokusebenza lwekholi yevidiyo.Abasebenzisi abaningi basho iWhatsApp njengohlelo olusebenziseka kalula ngoba alunazikhangiso ezingena phakathi kwengxoxo yakho. Kusukela yethulwa, uhlelo lokusebenza lwenziwe ngcono futhi lwavuselelwa kaningana. Isibonelo, kuze kube unyaka ka-2009, awukho umlayezo kuhlelo lokusebenza ovikelwe.
Ngenxa yalokhu, izingxoxo nedatha zingagenwa yinoma ngubani kalula. Kepha ngo-2012, i-WhatsApp ivuselelwe, kwafakwa nesici esisha, esingabhala ngemfihlo zonke izingxoxo ezigcina ziyimfihlo. Eminyakeni embalwa edlule, i-WhatsApp nayo ibidlala indima ebalulekile ekwenzeni lula ukuxhumana kwezamabhizinisi. Imininingwane nezaziso ezibalulekile manje sezingafinyelelwa kubantu abaningi engxoxweni yeqembu ngokucindezela nje inkinobho. Ngaphezu kwalokho, ukukhumbula ukuphepha nokuvikeleka kwabasebenzisi bayo, isici sokulandelela bukhoma sivumela ukwabelana ngendawo yomuntu ngqo nabangani nomndeni.
Imihlahlandlela eminingi ye-WhatsApp:
Iqembu le-WhatsApp - Dala, Yabelana futhi Uthumele
I-WhatsApp vs Signal - Yikuphi okuphephile?
Imfihlo namathiphu we-WhatsApp: Kufanele Ukwazi
Yebo, iningi lakho kungenzeka ukuthi awazi amaqhinga ambalwa anikezwa yi-WhatsApp. Kuyo yonke le minyaka, konke esikwaziyo yizisekelo zeWhatsApp okuyiqembu lengxoxo, izingcingo zevidiyo, ukwabelana ngamafayela wemidiya, namanye amadokhumenti nezingcingo zezwi. Kodwa-ke, kunezinye izinto eziningi ezithokozisayo i-WhatsApp okufanele inikeze abasebenzisi bayo. Ake sixoxe ngamanye amaqhinga e-WhatsApp.
1. Ungafunda futhi Uthumele Imilayezo Ngaphandle Kokuthinta Isikrini
Kufanele ukuthi ucabanga ngokuthumela noma ukufunda imilayezo ngaphandle kokuthayipha ocingweni noma ukuvula ingxoxo. Yebo, ubuchwepheshe bukwenze izinto eziningi zenzeka futhi zanethezeleka kuwe. Ungabheka kunoma imuphi uSiri noma uMsizi weGoogle ongumsizi wefoni ephathekayo ngale njongo. Ngomyalo owodwa womlomo, imilayezo yakho izofundwa noma ithunyelwe ngokushesha. Okuphawulekayo, akunjalo? Manje kungani ungazizami ngokwakho?
Izingxoxo zingamakwa njengezingafundiwe nangemva kokuba uzifundile
Ngabe lokhu kwake kwenzeka kuwe ngaphambilini, ukuthi wavula ingxoxo kodwa wakhohlwa ukuphendula, noma ngabe uyivule ngephutha lapho ungafuni? Akusekho ukukhathazeka ngezimo ezinjengezingxoxo ezingamakwa kalula njengezingafundiwe. Abasebenzisi be-Android kufanele nje badonsa ingxoxo ofisa ukuyimaka njengengafundiwe uzothola inketho yokuchofoza okungafundiwe kulokho, futhi ingxoxo ingamakwa njengengafundiwe.
Endabeni yabantu abane-iOS, swayiphela ngakwesokudla ingxoxo, bese inketho ethi 'Okungafundiwe' ivela esikrinini; chofoza kuyo, futhi leyo ngxoxo ethile izomakwa njengengafundiwe. Lesi sikhungo sizokukhumbuza futhi ngokuphendula ingxoxo uma ukhohlwa ukuyiphendula.
3. Imilayezo Eyimfihlo Yokusakaza Okusheshayo enoxhumana nabo abaningi ngaphandle kokwenza iqembu
Kungaba nemilayezo eminingi ocabanga ukuthi kufanele isakazwe ngokuhlukile ngaphandle kokwenza iqembu elithile layo. Kulula ukusakaza imiyalezo.
Uma unedivayisi ye-Android, kunamachashazi amathathu amile ekhoneni eliphezulu kwesokudla, chofoza kuyo, bese uzothola ithuba ‘lokusakaza imiyalezo.’
Ngakolunye uhlangothi, uma une-iOS, khetha isithonjana semenyu ekhoneni eliphezulu kwesokunxele bese uqhafaza kunketho ‘yemiyalezo yokusakaza.’
3. Shintshela kumafonti amasha
Ubona ifonti efanayo eyisidina noma kunini lapho uvula i-WhatsApp yakho, akunjalo?. Manje, ungashintsha amafonti we-WhatsApp bese uzama amafonti amasha amangalisayo. Ungayiqinisa imilayezo ebalulekile noma uyishintshe ibe omalukeke. Uma ufuna ukwenza ifonti ibe nesibindi, faka i-asterisk ekuqaleni nasekugcineni komusho. Uma kwenzeka ufuna ukuyiguqula ibe omalukeke, faka underscore ekuqaleni nasekugcineni komusho.
4. Ukwabelana Ngendawo Obukhoma Nabangane Nomndeni
Sezadlula izinsuku lapho kwakudingeka uvule amamephu wakho we-Google nabangani bakho nomndeni wakho ukulandelela indawo okuyo. I-WhatsApp inale sici esivelele sendawo ebukhoma engabiwa nabangani bakho nomndeni wakho. Indawo igcina ukubuyekeza nomaphi lapho uya khona.
5. Fihla ‘’ Ukugcina Ukubonwa Kwakho ”Kalula kuWhatsApp
Wake wabanjwa ngenkathi unganaki umuntu ngenxa nje yokuthi 'Ugcine ukubonwa' kuWhatsApp? Nokho, manje usungakwazi ukufihla kalula okugcine ukubonwa koxhumana nabo. Ngale ndlela, abasoze bazi ngesimo sakho esiku-inthanethi kanye nokungaxhunyiwe ku-inthanethi.
6. Susa imikhaza eluhlaza okwesibhakabhaka
Umaki oluhlaza okwesibhakabhaka kuWhatsApp ukhombisa ukuthi lowo owamukelayo uwufundile umyalezo. Kodwa-ke, kunezikhathi lapho ungafuni ukuthi omunye umuntu azi ukuthi uwufundile umyalezo; uma kunjalo, ungafihla umkhaza oluhlaza okwesibhakabhaka.
7. Misa ukulanda okuzenzakalelayo kweMedia Files
Imvamisa igalari yakho igcwala inqwaba yezithombe ezingafuneki ezivela koxhumana nabo abahlukahlukene. Manje usungalanda amafayela emidiya owafunayo kugalari yakho bese ugcine okunye ngaphandle kokuwalanda. Lokhu kuzokonga isitoreji sakho esiningi futhi kukusize ukhethe kuphela izithombe ezibalulekile nama-audios.
8. Xoxa Ngaphandle Kokulondoloza Inombolo ku-WhatsApp
Phambilini bekudingeka ukuthi kugcinwe inombolo ukuze kuqale ingxoxo kuWhatsApp. Manje, ungaqala ukuxoxa kalula ngaphandle kokulondoloza inombolo kudivayisi yakho. Ngakho-ke, manje ususindisiwe enkingeni yokonga inombolo ngayinye kuselula yakho.
9. Ungayibuyisa Imilayezo Esusiwe
Imvamisa kwenzeka ukuthi eminye yemilayezo isuswe ku-WhatsApp yakho. Kunemiyalezo eminingi ebalulekile ofisa ukuyibuyisela le milayezo kungenziwa kalula. Yonke le milayezo ingabuyiselwa ngezinketho zokulondoloza. Iya kumasethingi bese wenza isipele imiyalezo.
10. Buka Imilayezo Esusiwe Kalula
Kuhlala kunelukuluku lokwazi imilayezo esusiwe. Manje usungakwazi nokuqukethwe ngumlayezo osusiwe. Odinga ukukwenza ukulandela ezinye zezinyathelo ezilula ukubuka izinyathelo ezilula.
Okokuqala udinga ukulanda okususiwe kusuka ku-Google Play Isitolo sakho.
Uma uhlelo lokusebenza selufakiwe, gcwalisa imininingwane efanele, bese uthepha inketho 'WhatsApp'.
Vumela uhlelo lokusebenza ukugcina amafayela; uma usukwenzile, uhlelo lokusebenza luzogcina ngokuzenzakalela yonke imilayezo oyithola ku-WhatsApp, kufaka phakathi nemilayezo esusiwe.
11. Sebenzisa ama-akhawunti amabili we-WhatsApp kufoni eyodwa
Kungenzeka kube nezikhathi lapho uzwa isidingo sokuba ne-akhawunti ehluke ngokuphelele ye-WhatsApp ngenhloso ehlukile. Lesi sifiso manje sesingagcwaliseka ngokulanda noma yiziphi izinhlelo zokusebenza zokuhlanganisa; ngokwesibonelo, ku-Android, ungalanda, Parallel Space. Khetha i-WhatsApp bese uyifaka ku-Parallel Space. Ngale ndlela, uzoba nohlelo lokusebenza ne-akhawunti ehluke ngokuphelele.
12. Izingcingo zeWhatsApp zingarekhodwa futhi
Kuze kube manje, wazi kuphela ngezingcingo ezijwayelekile ezirekhodwayo. Kepha umangele, ngisho nezingcingo zeWhatsApp zingaqoshwa. Kuyindlela elula yokuqopha izingcingo ze-WhatsApp. Landela izinyathelo ezibalulwe ngezansi.
Landa i-Cube Caller kudivayisi yakho ye-Android.
Vula uhlelo lokusebenza lwe-Cube Caller bese ushintshela ngqo ku-WhatsApp.
Ngemuva kwalokho, ungashayela umuntu omkhethile kusuka ku-WhatsApp.
Lapho nje ucingo luqala ukurekhoda, luzokhombisa ukukhanya; uma ikhombisa noma yiluphi uhlobo lwephutha, ushintsha izilungiselelo zohlelo lokusebenza bese uyazama futhi.
Ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza zokuxhumana nabantu, i-WhatsApp isisiza kuphela ukuxhumana nabantu esivele sibazi noma esabelana nabo izinombolo zethu zokuxhumana. Lokhu kwenza kube ubuchwepheshe obukhawulelayo. Ukusetshenziswa okukhulayo kwalolu hlelo manje sekwenze kwaba umlutha kubantu. Ngakolunye uhlangothi, izinhlelo zokusebenza zokuxhumana nabantu zisondeze abangane bethu, izihlobo nabathandekayo bethu abaseduze, kodwa ngasikhathi sinye basiqhelelanisa nalabo abaseduze. Ngaphandle kwemithelela yayo emibi, kukumsebenzisi ukuthi asebenzise uhlelo lokusebenza ngokuhlakanipha ngaphandle kokuzilimaza yena uqobo.
Amathiphu namaqhinga ama-AirPods angama-21